Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Daawo Muuqaal :Heeybta Muqalasiintii Dadka Badda ku haligay oo la aqoonsaday & Hooyo ilintii ka dhamaatay !!
August 18 2017 15:38:00
Daawo Muuqaal :Heeybta Muqalasiintii Dadka Badda ku haligay oo la aqoonsaday & Hooyo ilintii ka dhamaatay !!
Hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Faadumo Cawil Kheeyre ayaa waxa ay shaacisay in la garanayo ama la aqoonsaday ragii muqalasiinta ahaa ee haligay dadkii faraha badnaa ee maalmo ka hor ku dhamaaday bad weeynta u dhaxeysa dalalka Masar iyo Talyaaniga .
Hooyadaan oo ku nool gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ayaa musiibada dhacday waxaa kaga jiray gabadh ay dhashay iyo cunug yar oo ay wadatay waxeeyna Hooyo Faadumo Cawil Kheeyre sheegtay inay lacag u xawileen ragii muqalasiinta ahaa ee haligay nolasha ku dhawaad 460-qof .
Hooyadaan Soomaaliyeed oo ilintii ka dhamaatay ayaa waxa ay bulsho weynta Soomaaliyeed ka cod saneeysaa in laga caawiyo sidii loo soo qaban lahaa ama Maxkamad caalami ah loo soo taagi lahaa Muqalasiintii Soomaaliyeed ee caruurteeda haligay oo isku darsaday naf iyo maalba kuwaas oo iminka ku nool gudaha dalka Masar .
Xafiiska Oslo Norway
· mamaan on April 21 2016 ·